> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka Android inay Computer
Raaxaysogaalnimadaada qaadista sawirrada la telefoonka aad Android oo kiniin ah? Haddii ay sidaas tahay, waxaan u maleynayaa in laga yaabaa in aad qaadatay tan oo sawiro. Si kastaba ha ahaatee, waxa hadii telefoonka aad Android oo kiniin la xado ama la jejebiyey? Waxa ay noqon doontaa khasaare wayn. Haddii aad ka welwelsan tahay, oo aad jeceshahay waxaa laga yaabaa in ay sawiro ka Androd wareejiyo computer u gurmad.
Run ahaantii, waa ay fududahay in la dhoofiyo sawiro ka Android inay computer. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay ku xidhmaan telefoonka Android ama kiniin ah si aad u computer via cable USB ah. Markaas disk ah ka muuqan doontaa on your computer. Waxaa fur oo heli folder - DCIM. Markaas nuqul aad sawiro doonayay in your computer.
Ma waxaad sida caadiga ah waxa ay sameeyaan sidan? Dhab ahaantii, halkan waa si kale oo lagu sawiro ka qaado si ay Android PC. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad kala soo baxdo tababare Android - Wondershare MobileGo for Android ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) . Labada qeybood oo ay si fiican u qorsheeyay in uu caawiyo in aad maamuli music, xiriirada, SMS, sawiro iyo barnaamijyadooda on your computer. Sidaa daraadeed, waxa quruxsan fudud si ay u dhoofiyaan sawiro ka Android inay your computer.
Download this version maxkamad free on your computer in ay isku day ah!
Bedelka sawiro ka Android inay PC
Halkan, waxaan qaadi tusaale ka mid ah version Windows ah. Haddii aad isticmaasho Mac ah, kaliya aad u qaadi karaan tallaabooyinka ka mid ah.
Step1. Calan u Android phone ama kiniin
Ku rakib oo ay maamulaan Tababaraha this Android on your computer. Connect telefoonka Android ama kiniin labada via cable USB ama via Wi-Fi (Wi-Fi oo kaliya loo isticmaali karaa version Windows.). Marka aad telefoon Android ama kiniin waxaa si guul leh ogaan barnaamijkan, oo dhan info ee aad taleefan Android ama kiniin la soo bandhigi doonaa furmo suuqa hoose.
Fiiro gaar ah: Wonershare MobileGo for Android si buuxda u la jaan qaada phone badan iyo murriyado, sida Samsung, HTC, LG. Si aad u hesho macluumaad badan, waxaad riixi kartaa taageerayaan phone Android iyo kiniiniyada .
Step2. Sawiro ay kala soo wareegeen Android inay computer
In geedka buugga bidix, guji saddexagalka ee soo socota si ay "sawiro" tab. Dhammaan albums ah ee aad taleefan Android ama kiniin ku qoran yihiin. Fur album ah oo aad ka heli photos doonayo. Guji "Dhoofinta". Markaas, suuqa kala browser file a soo booda. Dul meeshii aad go'aansato in aad badbaadin sawiro. Markaas barnaamijkan uu bilaabo inuu dhoofin sawiro. Ka dhig telefoonka Android ama kiniin ku xiran inta ay socoto wareejinta.
Daawo soo socda video tutorial
Daacadnimadii, users badan waxay dooran karaan inay u gudbiyaan Android photos in computer la Card SD ah. Inkasta oo aan door bidaan in ay isticmaalaan tababaraha Android - MobileGo for Android. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku wareejiso photos via Wi-Fi. Waxaa habboon, gaar ahaan marka ay jiraan wax qalad ah aad cable USB. Marka laga reebo sawiro, barnaamijkan awood aad la sameeyo wax ka badan in aadan kaarka SD hal samayn karaa. Waxaad sameyn kartaa in gurmad iyo soo celinta dhammaan macluumaadka telefoonka aad Android iyo murriyado, kuwaas oo, xiriirada, abuse wac, SMS, music, videos, barnaamijyadooda iyo jadwalka. Haddii aad ka soo dejisan barnaamijyadooda fantastic badan, waxaad sidoo kale iyaga ku rakiban kartaa in aad telefoon ama Android kiniiniyada.
Download barnaamijkan waa in hadda isku day!
Sida loo sii qulquli Videos ka Computer si ay Android
Sida loo isticmaalo Samsung Kies si aad u cusboonaysiiso Samsung casriga